Cela ubomi bomsebenzi ngeSMS: amanyathelo ekufuneka uyazi ukuba unayo | Ezezimali
Cela ubomi bomsebenzi ngeSMS
Ubomi bomsebenzi luxwebhu ekuya kuthi ngalo lonke ixesha lokuphila kwakho, ungadinga ukubonisa. Umzekelo, xa ujongene neemviwo zokhuphiswano, udliwanondlebe lomsebenzi, okanye ukucela ukungaphangeli. Nangona kunjalo, oku akunakususwa kube kanye kwaye yiyo, kuba iyatshintsha ngeentsuku, iiveki neenyanga. Kwaye ngamanye amaxesha awunaso isatifikethi sedigital okanye igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Ke ngoko, ukwazi indlela yokucela ubomi bomsebenzi ngeSMS kungayisombulula ingxaki.
Kwaye yile, enye yeendlela zokuyicela ukuba yenziwe kukhuseleko lwezeNtlalontle onokuyenza ngomyalezo obhaliweyo. Nangona kunjalo, Ungabucela njani ubomi bomsebenzi ngeSMS? Apha sikunika amanyathelo ekufuneka uwathathile kwaye, kwimizuzu engaphantsi kwemihlanu, uya kuyifumana kwikhompyuter yakho ukuze ukwazi ukuyisebenzisa xa uyifuna. Ewe kunjalo, khumbula ukuba, ukuba uyasebenza, iyakutshintsha njengoko iintsuku zihamba kuba uya kuba uvuna ngakumbi iintsuku zokusebenza.
2 Buyintoni ubomi bomsebenzi
3 Iindlela zokubuza ubomi bomsebenzi
4 Ungabucela njani ubomi bomsebenzi ngeSMS
Ngaphambi kokuba uthethe ngendlela yokucela ubomi bomsebenzi ngeSMS, kuya kufuneka uyazi ukuba sithetha ngantoni. Kwaye kunjalo Olu xwebhu uNcedo lwezeNtlalontle olusinika lona luqulathe lonke ulwazi malunga nobudlelwane bakho emsebenzini, Zombini ukusukela oko baqala kwaye zisusela esiphelweni, ngohlobo lokuba ixesha apho ubhalisele ukhuseleko liyaqokelelwa (kwaye ke kuthathwa njengomsebenzi osebenzayo).
Ngamanye amagama, yingxelo apho isishwankathelo sobomi bakho bokusebenza siqokelelwa, kunye namahla-ndinyuka owehleleyo, kunye neenkampani obusebenzela zona kule minyaka idlulileyo.
Buyintoni ubomi bomsebenzi
Yikholwe okanye ungakholelwa, ingxelo yobomi bomsebenzi luxwebhu olubalulekileyo olungenomsebenzi omnye kuphela, kodwa uninzi lwazo. Kwaye oko kuye Awuzukukwazi kuphela ukuwaqinisekisa amava onawo kwiinkampani ezahlukeneyo ozisebenzeleyo, kodwa khumbula imihla yokuphila kwakho emsebenzini (into ethi, kule minyaka idlulileyo, ixatyiswe.
Kwakhona, Omnye umsebenzi wobomi bokusebenza kukuqinisekisa ukuba inkampani oyisebenzelayo ikubhalisile ngokwenene. Ngapha koko, ayizokube kokokuqala ukuba umsebenzi afumane ingqalelo kwinkampani yakhe kuba uqinisekisile ukuba akabhaliswanga. Kwaye, ukuba iyaqhubeka ngoluhlobo, umqeshwa angayigxeka inkampani ngale nto (kunye noKhuseleko lweNtlalontle, nje ukuba ibone ukuba umsebenzi usebenza ngokwenene kwinkampani, angamkhupha kwangoko (kwaye uya kuyigweba inkampani ngokungakwenzi oko) .
Kukho imisebenzi emininzi ebomini, enje:
Ukunikezelwa kwexesha elicatshulweyo. Oku kunokuba kukuqala amaphepha omhlala phantsi; kodwa naleyo yentswela-ngqesho.
Ukwamkela amava xa ujongene nokhuphiswano. Endaweni yokufakela iikopi zeCVs, isatifikethi sokusebenza somsebenzi sithethelela amava onawo wokubala amanqaku "kwinqanaba lokugqibela".
Nangona siza kukunika amanyathelo ngendlela yokucela ubomi bomsebenzi ngeSMS, oko akuthethi ukuba ayinakucelwa ngezinye iindlela. Ukuba awufuni ukunika inombolo yakho yeselfowuni okanye ngalo maxesha awunakuba nayo, kukho ezinye iindlela onokukhetha kuzo. Zezi:
Ngesiqinisekiso sedijithali. Unesatifikethi sedigital esikwisazisi sakho se-elektroniki (ukuba nje asiphelelwa) kunye nesatifikethi sekhompyuter (ukuba usifumene kwiMint and Stamp Factory). Okokugqibela akupheli, kodwa kuya kufuneka ulumke kuba, ukuba ufomatha ikhompyuter, ungaphulukana nayo ukuba awuyisusi.
Ngokusisigxina Cl @ ve. Luhlobo lobhaliso olunceda ukuba ungaxhomekeki kwisatifikethi. Kule meko, ukuyicela kungathabatha inyanga, ke ukuba ufuna ubomi obungxamisekileyo bokusebenza ayisiyonto ilungileyo ukuyenza (ngaphandle kokuba sele unayo).
Ngokuya ukuya kuKhuseleko lweNtlalo. Oko kukuthi, yiya kwiiofisi zoKhuseleko lweNtlalo ukuya kucela ubomi bakho bomntu buqu.
Ngedatha yakho. Okokugqibela kweendlela zokucela isatifikethi sobomi emsebenzini kukugcina idatha yakho yobuqu. Imalunga nokuba ufake idatha yakho: igama, ifani, idilesi ... ukuze ukhuseleko lweNtlalo luthumele uxwebhu.
Ungabucela njani ubomi bomsebenzi ngeSMS
Ukujolisa kolu khetho lokugqibela, siza kuchaza inyathelo ngenyathelo yonke into ekufuneka uyenzile ukuze ufunde indlela yokucela ubomi bomsebenzi ngeSMS. Inyani yile yokuba ilula kakhulu kwaye inenzuzo yokuba awusifuni isitifiketi sedijithali okanye i-cl @ ve pin ukuyifumana. Ukongeza, kuyakhawuleza kwaye uya kufuna kuphela iselfowuni ukuze uyifumane.
Kodwa yintoni ekufuneka yenziwe?
Okokuqala, yiya kwiwebhusayithi yoKhuseleko lweNtlalo. Nje ukuba ungene ngaphakathi, kuya kufuneka ufumane apho ubucelwa khona ubomi bomsebenzi. Ngokukodwa, kuya kufuneka uye kwicandelo labemi. Kuyo uyakufumana uluhlu lweenkqubo kodwa eyona inomdla kuwe ziingxelo kunye nezatifikethi.
Kwakhona, nasemva koluhlu, kuya kufuneka ufumane iNgxelo yoBomi boMsebenzi. Ukuyifumana, iya kukunika iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, enye yazo yiSMS. Cofa kuyo.
Ukufumana ubomi bomsebenzi ngeSMS kuyakufuneka unikezele ngolwazi oluceliweyo kwiwebhusayithi yoKhuseleko lweNtlalo, kubandakanya nenombolo yeselfowuni apho unokufumana khona iSMS. Oku akunakuqulatha ubomi bakho bomsebenzi, kodwa ikhowudi oyifunayo.
Kwaye, xa ufumana i-SMS, iya kuza nekhowudi oya kuyifaka kwiwebhusayithi yoKhuseleko lweNtlalo (ke ngoko, musa ukusuka apho ukuyo kwisikhangeli). Le khowudi ayikho enye into ngaphandle kwePIN eya kukunika ukufikelela "okwethutyana" kubomi bakho bomsebenzi ukuze ukwazi ukuyijonga, ukuyiprinta okanye ukuyikhuphela.
Njengoko sikuxelele, ikhowudi ayisosigxina kwaye emva kwethutyana iyakuphelelwa kodwa awunakukhathazeka. Ukuba uyayidinga kwakhona, ungacela kwakhona ubomi bomsebenzi ngeSMS okanye ngayo nayiphi na enye indlela ekubonelela ngayo ngoKhuseleko lweNtlalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Cela ubomi bomsebenzi ngeSMS
Zithini iimpahla? Iingcamango eziphambili